‘चेहरे’ पोस्टरमा किन अटाइनन् रिया ? - Rastiya News::Nepali Online News
मुम्बई– बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधन पछि उनकी प्रेमिका अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीको जीवन सदाका लागि बदलिएको छ । उनी सुशान्तको निधन अघि सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय थिइन् । अहिले भने उनी मिडियाको क्यामराबाट टाढिन सक्रिय छिन् ।
एक समय लागुऔषधको मुद्धामा फसेकी रिया आफ्नो पहिलाको जीवनमा आफूलाई ल्याउन प्रयासरत छिन् । यही माहौलमा उनी अभिनित फिल्म ‘चेहरे’ यसै वर्षको अप्रिल ३० मा रिलिज हुँदैछ ।
आजतकमा प्रकाशित समाचारअनुसार हालैमात्र फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । तर पोस्टरमा रियालाई स्थान दिइएको छैन । सार्वजनिक पोस्टरमा अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी र अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजालाई मात्र स्थान दिइएको छ ।
फिल्ममा प्रमुख भूमिकामा अभिनय गरेकी रियालाई नै पोस्टरमा नराखिएपछि बलिउडमा चर्चा शूरु भएको छ । अमिताभले इन्स्टाग्राममा तस्वीर पोस्ट गर्दै रियाबाहेक सबै स्टारलाई ट्याग गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले अन्तिम अवस्थामा रियाको अनुहार पोस्टरबाट त हटाइएको हैन ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । कतिपयले रियाको स्थानमा क्रिस्टललाई त ल्याइएको होइन् भन्ने आशंका पनि गरेका छन् । तर रियाको एक साथीले रियाको हवाला दिँदै आफूलाई केही फरक नपर्ने बताएकी छन् ।